Badhasaabkii Hore Ee Hargeysa Cali Asad Oo Geeriyooday | Araweelo News Network (Archive) -
Djibouti (ANN) Badhasaabkii hore ee Hargeysa ee xukuumaddii Madaxweyne Rayaale, Cali Xasan Maxamuud (Cali-Asad), ayaa ku geeriyooday cusbitaal ku yaal caasimada dalka Djibouti. Sidaana waxa Araweelonews u xaqiijiyay
qaar ka mid ah ehelada marxuumka. Marxuum Cali Asad ayaa halkaa u tegey todobaadyadii u danbeeyay xaalad caafimaaad. Marxuumka ayaa aad looga yaqaanay inta baddan Somaliland, gaar ahaan caasimada Hargeysa, wuxuuna xilal kala duwan kasoo qabtay xukuumaddihii Marxuum Cigaal iyo xukuumaddii u danbaysay ee Daahir Rayaale oo markii ugu danbaysay uu ahaa badhasaabka hargeysa. Ka hor intii aan xukuumaddaa lagaga adkaan doorashadii madaxtooyadda Somaliland ee 26 jun 2010. Marxuumka, ayaa laba todobaad ka hor loo qaaday dalka Djibouti, ka dib markii xannuun kedis ah oo dhinaca wadnaha ahi ku soo booday, kaasoo aakhirii sababay geeridiisa.
Maamulka iyo hawlwadeenada shebekadda Araweelonews waxay tacsi u dirayaan ehlada Marxuumka geeriyoodey asxaabtiisa, waxayna illaahay uga baryayaan inuu naxariistii jannada ka waraabiyo iyagana samir iyo iimaan ka siiyo.